Kilasy roa an'ny Golf Golf tokony ho fantatrao
Ity no iray amin'ireo taranja malaza indrindra sy jaky miafina
Ny Golf dia ny biby sy ny tsodrano.
Ny Golfers dia tia ny haavon'ny hafanam-po, ny làlam-pahaizana ara-jeografika, ny toerana sy ny fanamby miavaka. Izany no fomba ataonay golf amin'ny Colorado, Rocky Mountain.
Na dia malaza amin'ny hantsan'ny piste aza izahay, ny fitsangatsanganana sy ny lasy, dia izy ireo ihany koa no mipetraka any amin'ireo làlan-kaleha tsara indrindra sy mahafinaritra indrindra any an-dranomasina eto amin'izao tontolo izao.
Golf Digest no nametraka ny top 20 golf courses any Colorado.
Ao anatin'io lisitra io: fanta-daza iray malaza ao amin'ny Vail Valley, ny Club ao Cordillera. Tsy ao anatin'io lisitra io: nisy fianarana vao haingana nihodidina 30 minitra tany Eagle antsoina hoe Frost Creek. Io dia iray hafa amin'ny jaky miafina, nefa koa ho mendrika, noho ny antony samihafa.
Ireto ny roa amin'ireo toeram-ponenan'ny golf indrindra any an-dohasaha -Cordillera, miaraka amin'ny lazany mafonja, ary ny fianarana manokana ao Frost Creek, izay mendri-piderana amin'ny lisitra tsy maintsy-putt.
Zavatra iray mahatonga an'i Cordillera ho tena mahafinaritra ny toerana misy azy. Fotoana kely avy any Beaver Creek sy ny tanàna kelin'i Edwards, fa eo an-tampon'ny tendrombohitra ao ambadiky ny vavahady no misy azy, noho izany dia mahatsapa azy manokana sy lavitra.
Ny fandaharam-potoanan'i Cordillera dia novolavolan'ireo sasantsasany amin'ireo anarana lehibe indrindra: Jack Nicklaus, Tom Fazio ary Hale Irwin. Ny klioba dia manana dingana telo samihafa, Valley, Mountain and Summit, samy manana fanamby manokana manokana avy.
Ny trano dia tena miavaka tokoa io lalana io.
Ny spa sy ny trano fonenan'ny Cordillera dia mijoro amim-pireharehana eny an-tampon'ny tendrombohitra miaraka amin'ny fomba fijery tsara indrindra ao amin'ny fanjakana, mitazana ny lohasaham-pandrosoana sy ny Sawatch Range.
Mialà eny amin'ny dobo misamboaravoara mafana, na ny dobo mafana na akaiky amin'ny rindrin'ny trano ao anaty dobo, izay mifandray amin'ny spa mahafinaritra nomena azy.
Raha ny marina, ity toeram-pitsaboana ity dia nifidy teo anivon'ireo toeram-pisakafoanana 10 voalohany any Amerika Avaratra - zavatra iray izay ho feno fankasitrahana noho ny andro lava nandehanana baolina teny an-dalana. Mifohaza amin'ny fomba fijery miolakolaka ao amin'ny efitranonao, miaraka amin'ny varavarankely misy rindrina sy balkon-tsaina mahazatra.
Miforàha amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana roa eo an-toerana ary jereo ny antony nametrahana ny Cordillera ho toerana tsara indrindra amin'ny fanjakana ho an'ny sakafo sy ny serivisy, avy amin'ny Conde 'Nast's Reader Poll - Gold List. Ny zava-drehetra ao Cordillera dia lehibe, nefa manan-tsaina, manana efitra 56 ihany. Izy ity no fototry ny tokantrano lavorary ho an'ny alpine golf miditra.
Tokony ho 30 minitra eo ho eo any Edwards ianao dia tonga any amin'ny tanàna be tendrombohitra Eagle. Ity no tranon'ny iray amin'ireo kolo-pelatanana tsy dia fantatra loatra - iray izay azo antoka fa handre bebe kokoa momba ny taona ho avy.
Ny Frost Creek dia fianarana tsy miankina mitokana any ivelan'ny tanàn-dehibe, eo amin'ny 1100 acres of complexity Colorado. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fananana dia nanjary tompon'ny fananana vaovao izay nanamafy tanteraka ny tanjony sy ny rivotra ary nisintona ny mpikambana ho lasa fitomboana avo.
Ity ny antony.
Voalohany indrindra, ny lalao golf tsy miankina - iray amin'ireo "marquis marquis" an'i Tom Weiskopf - dia maneho farihy sy valan-javaboary valo, lalam-pahavitrihana maherin'ny 285 hektara.
Ankoatr'izany, ny trano fatoriana maherin'ny 40.000 metatra toradroa dia mitondra vondrona ho an'ny fiaraha-misakafo sy zava-pisotro ara-tsosialy, ary manome spa-toerana sy toeram-pitsaboana an-jatony, toy ny fisidinan'ny vorona, ny fiaramanidina sy ny bisikileta.
Ho an'ny fampisehoana mahafinaritra an-kalamanjana, oh-so-Colorado, dia maka ireo "bikes matavy" elektronika (amin'ny kodiarana fanampiny, mba hahafahanao mitaingo azy ireo eny rehetra eny, anisan'izany ny ranomandry sy ny lanezy). Amin'ny ririnina rehefa mihidy ny dian-tongotra dia afaka mandinika azy amin'ny fomba fijery samihafa. Raiso ireo bisikileta mankany amin'ny dobo mangatsiaka, izay ahafahanao mandehandeha an-dalamby, na mankany an-tampon-kavoana - na amin'ny alina aza.
Ny efitrano maha-mpikambana ihany no mameno ny fitsangatsanganana tonga lafatra ary hijoro na dia tsy misy ny lalao golf aza. Ny efitrano efatra, kintana tsy miankina, dia atolotra ho an'ny mpikambana maraokana, ary manana ny zavatra rehetra tokony ho tsapanao ao an-tranony any an-tendrombohitra izy ireo.
Fenoy ny andronao amin'ny kitron-drivotra. Amboary ao amin'ny efitrano fandroana na lakolosy feno ao amin'ny toeram-ponenana, miaraka amin'ny fomba fijery izay toa mandeha amin'ny mandrakizay. Ho tsapanao fa ianao no hany olona eto amin'izao tontolo izao rehefa mijanona eto ianao. Ny vaovao tsara dia ny Frost Creek dia nanamboatra trano maromaro bebe kokoa mba hahafahanao manontany momba ny fidirana amin'ny klioba amin'ny tenanao. Raha misy fisokafana amin'ny maha mpikambana azy dia aza manantena azy ireo haharitra ela. Izany no karazana toerana sasao tsara fantatrao ary na dia ho faly aza ny hiainana.
Ny 11 Best Edibles any Colorado
6 Fialam-boly mahavariana ho an'ny ankizy any Colorado
Toeram-pisakafoanana tsara indrindra ao Vail, Colorado
Ireto ny 12 tsara indrindra azonao atao any Colorado
7 Winter Adventures ho afaka hankafy any Colorado (ankoatra ny skiing)
Ny 4 jolay sy ny fifanarahana Bar: Washington DC 2017
Ny fomba hitsidika ny olona hiara-mandeha sy hizara ny saram-pandefasana entana
Zavamaniry Zavamanidina isan-taona
Paska tany Eoropa Atsinanana
7 Fisehoan-javatra tsy hay lazaina eto Londres Ity Lohataona ity
Sarasatr'i Sarasota's Musings
Jereo ny Da Vinci's The Last Supper ao Milan
Ahoana no hanalavirana ny fiaran-dalamby amin'ny seranam-piaramanidina avo
Ny Torolalana ho an'ny Tranom-barotra any amin'ny Faritr'i St. Louis